‘प्राधिकरणले महसुल बढाए उद्योगीहरू डिजेल प्लान्टतिर आकर्षित हुनेछन्’ - UrjaKhabar ‘प्राधिकरणले महसुल बढाए उद्योगीहरू डिजेल प्लान्टतिर आकर्षित हुनेछन्’ - UrjaKhabar
काठमाडौं । कोभिड–१९ ले मुलुकमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) नोक्सान भइसकेको छ । १५ लाख मान्छे बेरोजगार भइसकेका छन् । यस्तो समयमा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । धेरै अर्थविद्हरूले यो महामारी विगतको भन्दा भिन्न प्रकारको छ भनिरहेका छन् ।
भूकम्प वा अन्य विपत्तिमा जस्तो अहिले अर्थतन्त्र सुधार हुन गाह्रो हुने विश्लेषण भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावित वासलात हेर्दा विभिन्न शीर्षकमा खर्च बृद्धि गरी मुनाफा देखाइएको छ । यस्तो खर्च वा नाफा कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्राधिकरणको यस्तो एकाधिकार तोड्न सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई महसुल निर्धारणको अधिकार दिएको जस्तो लाग्छ ।
हामीले प्रस्तावित वासलातमा हेर्ने हो भने बिनाकारण विभिन्न शीर्षकमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढाएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि, कर्पोरेट कार्यालयको खर्च १ सय ४३ प्रतिशतले बढेको छ । यो खर्च मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने हामी ४ प्रतिशतले महसुल घटाउन सक्छौं ।
मानव संशाधनमा पनि ४३ प्रतिशतले खर्च बढेको देखिन्छ । यो नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि अर्को ४ प्रतिशत महसुल घटाउन सक्छौं । ५ प्रतिशत प्रसारण र चुहावट घटाउन सक्यो भने ८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी हुन सक्ने देखिएको छ । यसर्थ, आयोगले यी सबै बुँदालाई सुक्ष्म प्रकारले अध्ययन गरेर निर्णय गर्न म अनुरोध गर्दछु ।
प्राधिकरणले आफ्नो नोक्सानी पूर्ति गर्न महसुल बृद्धिलाई नै आधार बनाउन थाल्यो भने बजारमा उत्पादन कसरी बेच्न सक्छ ? जलस्रोतको धनी देशले विश्वमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी फाइदा बिजुलीलाई लिएर हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी र हाम्रा उत्पादन बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ भन्ने योजना हुनुपर्छ ।
विद्युत् पनि एउटा कच्चा पदार्थ हो । यसैले, विषम परिस्थितिमा विद्युत् महसुल बढ्नुपर्ने कुनै तात्पर्य देखिँदैन । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षदेखि खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व निशुल्क पाउने हुँदा संस्था कुनै नोक्सानीमा जाने सम्भावना देखिँदैन ।
कोभिड–१९ को महामारीमा देशका सम्पूर्ण जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो । संसारका अधिकांश मुलुकमा पनि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले कुनै न कुनै तरिकाले सुलभ दर निर्धारण गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
कुनै पनि अवस्थामा महसुल बढाएमा देशका उद्योगधन्दा धराशयी भई देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुने परिस्थिति देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायी विद्युत् उत्पादनको वैकल्पिक खोजीमा लाग्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । आजको समयमा पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य ज्यादै कम भइसकेको छ ।
यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्राधिकरणको मूल्यभन्दा सस्तो पर्ने हुँदा यसतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट व्यापारघाटा अझ बढ्नेछ । भारतीय बजारमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ५ रुपैयाँभन्दा पनि कम भइसकेको छ । यसैले, प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गर्नुभन्दा देशमै बढी खपत गराउने वातावरण तयार गराउन सक्यो भने ऊ सजिलै नाफामुलक संस्था बन्न सक्छ ।
कोभिडको महामारीमा निम्न बुँदा समेटिने गरी र हरेक निकायलाई मान्य हुने गरी महसुलको निर्णय गरिदिनुहुन आयोगलाई अनुरोध गर्दछौं ।
१. दुई–अढाई वर्षदेखि २४ सैं घन्टा विद्युत प्रवाह भइसकेको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको कुनै औचित्य छैन । र, यसको छुट्टै महसुल हुनुपर्ने पनि कुनै औचित्य देखिँदैन ।
२. विगतमा सुख्खायाममा विद्युत् उत्पादन कम हुने हुनाले महसुल दर फरक राखिएको थियो । वर्तमान र भविष्यमा पनि आवश्यकता भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने हुनाले फरक दरको पनि औचित्य छेन ।
३. महामारीको समयमा देशको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न उद्योगधन्दा सुचारु गरी टेवा पुर्याउन तथा आत्मनिर्भर हुनका लागि सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले हालको महसुल दरमा २० प्रतिशतभन्दा कम गरे आर्थिक पुनरुत्थान चाँडो हुने विश्वास लिइएका छौं ।
अन्त्यमा, आयोगले देशको आर्थिक उत्थान हुने गरी सही निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हामी उद्योगी व्यवसायी र जनताले विश्वास लिएका छौं ।